သတင်း - ဖန်ပုလင်းငယ်ဖြင့် ယူဆောင်လာသော ဂွင်သည် တရုတ်ဖန်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေမည်လား။
ဖန်ပုလင်းငယ်ဖြင့် ယူဆောင်လာသော အမြတ်ဝေစုသည် တရုတ်ဖန်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေမည်လား။
သတင်းအရ၊ အစွန်းပိုင်းကျဆင်းမှုသည် အစုရှယ်ယာများအပေါ် အချို့သောအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသောကြောင့် စျေးကွက်သည် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း နိမ့်ကျလာပြီး စုစည်းမှုအားနည်းသွားပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပွဲတော်မတိုင်မီ ပေါ့ပါးသောအဆင့်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကာ အရင်းအနှီးရောင်းဝယ်ရေး၏ ဆန္ဒသည် မခိုင်မာပါ။ဇူလိုင်လထဲ ရောက်တော့မယ်။ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံစိုက်သင့်သည့် အရာများစွာကို ပြောသည်-
1. ယခုသီတင်းပတ်တွင် သိပ္ပံနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဘုတ်အဖွဲ့တွင် ရှယ်ယာအသစ်4ခု၊ ပင်မဘုတ်အဖွဲ့ 1 ခု၊ ကျောက်မျက်3ခုနှင့် တတိယဘုတ်အဖွဲ့အသစ်တွင် ရွေးချယ်ထားသော ရှယ်ယာအသစ်7ခုအပါအဝင် ရှယ်ယာအသစ် ၁၅ ခုကို စာရင်းသွင်းထားသည်။
တတိယဘုတ်အဖွဲ့အသစ်ကို "100% အနိုင်ရ" ဟုလူသိများပြီး ရံပုံငွေများစောင့်ဆိုင်းနေရပါမည်။ထို့အပြင်၊ တတိယဘုတ်အဖွဲ့အသစ်အတွက် စျေးကွက်တန်ဖိုးကို ခွဲဝေပေးရန် မလိုအပ်သော်လည်း၊ စာရင်းသွင်းမှုရန်ပုံငွေအသစ်သည် အသစ်ဖြစ်သည့်အခါတွင် အပြည့်ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး အအေးချိန်သည်2ရက်ဖြစ်သည်။
1 သန်း၏ သတ်မှတ်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ရန်ပုံငွေအသစ်သည် အကြီးစားရန်ပုံငွေများ ဖြစ်သင့်သည်။ရေတိုတွင်၊ ၎င်းသည် A-share အရင်းအနှီးအပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိလိမ့်မည်။
2. ဇူလိုင်လတွင် ကန့်သတ်ရှယ်ယာ 16.659 ဘီလီယံကို လည်ပတ်မှုမှ ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းလည်ပတ်မှုစျေးကွက်တန်ဖိုး ယွမ် 478.752 ဘီလီယံရှိပြီး 40% သည် သိပ္ပံနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်၊ တားမြစ်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့် စျေးကွက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး ၉၁.၂ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ယခုအကြိမ် တားမြစ်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းသည့်အတိုင်းအတာသည် ယခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။တားမြစ်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းပါက ရောင်းချရန် ဘဏ္ဍာငွေများ သေချာပေါက် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။အချို့သောစတော့ရှယ်ယာများကိုအာရုံစိုက်;
3. ဇူလိုင်လသည် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ၏ အကြိတ်အနယ် ထုတ်ဖော်သည့်ကာလဖြစ်သည်။ဇူလိုင်လ 15 ရက်နေ့မတိုင်မီ၊ ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတွင် ကျောက်မျက်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် ခန့်မှန်းချက်အားလုံးကို ထုတ်ဖော်သင့်သည်။
ရေတိုတွင် Baotuan မျိုးကွဲများသည် အားသာချက်များ ရှိပါသေးသည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ရန်ပုံငွေအများစု၏ ဘုံရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ အတော်လေးနည်းပါးပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ စျေးကွက်အတွင်း နှိမ့်ချချိန်ညှိရန် နေရာများ ရှိနေပြီး တစ်ပိုင်းနှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကိုလည်း ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။အစောပိုင်းအဆင့်တွင် ကြီးကြီးမားမားတိုးလာကာ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာစွမ်းဆောင်ရည်ထက်နည်းသော စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုချင်းစီအား အာရုံစိုက်သင့်သည်။
ဗျူဟာအရတော့ စျေးကွက်က အတော်လေး စိုးရိမ်စရာပါ။ရှည်သည်ဖြစ်စေ၊ အတိုဖြစ်စေ နှစ်ဖက်စလုံးက စျေးဆစ်ခြင်းမပြုပါ။မြင့်မားသောအဆင့် board relay တွင်မပါဝင်ဘဲနှင့် မကြာသေးမီက သိသိသာသာတက်သွားသော စတော့ရှယ်ယာများသည် အန္တရာယ်များကို အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ရှောင်ရှားနိုင်သည်။စျေးကွက်၏ ပင်မလိုင်းမပေါ်ပေါက်မီ ကာလတို အခွင့်အလမ်းများသည် အဓိကအားဖြင့် အကြောင်းအရာများတွင် လှည့်ပတ်နေပါသည်။China Daily အစီရင်ခံစာ၏ ခန့်မှန်းချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုင်းအုပ်စုများသည်လည်း ပါဝင်ရန် ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ရာထူးကို 30% ခန့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
နံနက်ခင်းတွင် အရစ်ကျလိုင်စင်သတင်းကြောင့် ဘဏ်စတော့များ မြင့်တက်လာသည်။ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ သူတို့သည် ကြီးမားလွန်းသော ခြေလှမ်းများကို လှမ်းပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့ပါ။ထိုနောက် ၎င်းတို့သည် လမ်းတွင် ပွဲစားကုမ္ပဏီများကို ပါ၀င်ပတ်သက်စေခဲ့သည်။
တစ်ခုလုံးတွင်၊ ဤသတင်းသည် ဘဏ်များအတွက် ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် အေးခဲနေသင့်သည်။ထို့အပြင်၊ ဘဏ်များတွင်လည်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ ကြီးမားသော ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများအပေါ် ဤသတင်း၏သက်ရောက်မှုသည် အမှန်တကယ်တွင် အကန့်အသတ်ရှိပြီး၊ ယင်းသည် အသေးစားငွေချေးကုမ္ပဏီများအတွက် ပိုဆိုးပါသည်။သို့သော်လည်း ဘဏ်စတော့များကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် အသေးစားငွေချေးကုမ္ပဏီများသည် လိုင်စင်များရယူနိုင်ပါက၊ ၎င်းသည် ငွေချေးသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်၊ ငွေချေးစာချုပ်များ ရိုက်ခတ်ခြင်းကို မြင်တွေ့ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပိုများလာသည်။လက်ရှိတွင်၊ ရှန်ဟိုင်းအညွှန်းကိန်းသည် အမှတ် 3000 အမှတ်အသားအနီးတွင် ရင်ဆိုင်နေရပြီး အညွှန်းကိန်းထိပ်သို့မရောက်ရှိမီ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းကြီးတွင် နောက်ဆုံးအခုန်တစ်ခုရှိနေပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ငွေရေးကြေးရေးကုမ္ပဏီများသည် အလယ်တန်းလိုင်းတွင် ရာထူးနေရာများ တည်ဆောက်ရန် အခွင့်အလမ်းကို စဉ်းစားနိုင်သည်။
Societe Generale Securities သည် ယနေ့ ငွေချေးကုမ္ပဏီများ၏ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာမှုကြောင့် ဤစတော့ရှယ်ယာများ မြင့်တက်လာနေသည်။ခဲတရုတ်သည် မှိန်ဖျော့သွားကာ ၎င်း၏အစစ်အမှန်အရောင်ကို ချန်ထားခဲ့သည်။သဲတွေကို လှိုင်းတွေစီးပြီးမှသာ ရွှေကိုမြင်နိုင်မှာပါ။အရင်ကြည့်ပါ။
ပြင်းထန်သော ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ငွေရေးကြေးရေး ငွေကြေးအဖွဲ့ Everbright Securities သည် တတိယဘုတ်အဖွဲ့ပြီးနောက် အမှားပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။"အလျားလိုက်ဘယ်လောက်ကြာပြီး ဒေါင်လိုက်ဘယ်လောက်မြင့်လဲ" ဟူသောစကားအတိုင်း၊ ဤစတော့ရှယ်ယာ၏အခွင့်အရေးသည် မကုန်သေးဟု ကျွန်တော်ခံစားရပါသည်။
အစွန်းပိုင်းကပ်ရောဂါ၏ ပြန်လည်တွန်းလှန်မှုကြောင့် ၎င်းသည် မြို့နှစ်မြို့တွင် အပြင်းထန်ဆုံးပန်းကန်ပြားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယနေ့တွင် ဆေးပုလင်းများထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် Zhengchuan Co., Ltd. နှင့် Shandong Pharmaceutical glass တို့သည် ကုန်သွယ်မှုကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလား။
hype logic သည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ကာကွယ်ဆေးသည် မှားယွင်းနိုင်သော်လည်း ပုလင်းသည် မှန်ကန်ရပါမည်။ကာကွယ်ဆေးပုလင်းက ဘယ်လောက်တက်လာလဲ။ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
ဖန်ပုလင်းငယ်သည် တရုတ်ဖန်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ဤကာကွယ်ဆေးပုလင်းကို အလတ်စား borosilicate ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။လက်ရှိတွင်၊ Kaisheng နည်းပညာသည် အလယ်အလတ် borosilicate ဖန်ခွက်ကို မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သည်။၎င်းကို အထူးဂရုပြုပါ။
မွန်းတည့်ချိန်တွင် Zhende ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု၊ Wantai ဇီဝဗေဒသည်လည်း ကုန်သွယ်မှုကန့်သတ်ချက်ကို သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ရေတိုလမ်းကြောင်းက ကောင်းတယ်။သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်;
ပန်းကန်ပြားပေါ်ရှိ ကောင်းမွန်သောစည်းချက်နှင့် လှည့်ပတ်မှုကို အာရုံစိုက်ပါ။စတော့အများစုသည် အဓိကအားဖြင့် trend oriented ဖြစ်သည်။China Daily ၏ မထုတ်ပြန်မီတွင် ဆေးဝါးပန်းကန်ပြားသည် အုပ်စုဖွဲ့စည်းပုံကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
၎င်းသည် ဒေသအလိုက် တက်ကြွသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။သတင်းတွင်၊ 2020 ခုနှစ်တွင် photovoltaic လေလံဆွဲခြင်းပရောဂျက်များ၏ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းပမာဏသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုကြီးမားသောကြောင့် photovoltaic ကဏ္ဍကိုအားကောင်းလာစေသည်;
ဤသည်မှာ ယနေ့ခေတ်တွင် လှပသော စျေးကွက်လမ်းကြောင်းအတွက် ပန်းကန်ပြားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။အစောပိုင်းကုန်သွယ်မှုတွင် ချစ်ပ်ပြားများကို ၎င်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း အဆုံးတွင် ချစ်ပ်များ တက်လာကာ ကျဆင်းလာသည်။
အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ စျေးကွက်အရင်းအနှီးကန့်သတ်ချက်ကြောင့် ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ကို ဆွဲထုတ်ပါက အခြားပန်းကန်ပြားများမှ ထုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုလုံးကို လိုက်တက်ရန် မထောက်ခံပါ။
ရေတိုတွင်၊ panels များနှင့် semiconductors များကို ဆက်လက်အာရုံစိုက်ရန် အခွင့်အလမ်းများရှိနေသေးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Longji ရှယ်ယာများ၊ ကြယ်ပွင့်တစ်ပိုင်းဒါရိုက်တာ၊ စသည်တို့။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဂိမ်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Caesar ယဉ်ကျေးမှု၊ လူကြိုက်များသောအမျိုးမျိုး၊ ယနေ့ခေတ်ပန်းကန်၏အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြသောအစောပိုင်းကုန်သွယ်တွင်ချိန်ညှိခဲ့သည်။
ရေတိုတွင် ယနေ့ခေတ်တွင် ကြီးမားသော ခြားနားမှုတစ်ခု ရှိနေသည်၊ ရေတိုတွင် သတိဖြင့် ဆက်ဆံရန် လိုအပ်ပါသည်။ကျဆင်းမှုကို ရပ်တန့်ပြီးနောက် ရံပုံငွေပြန်အလာကို စောင့်ပါ၊ ထို့နောက် အခွင့်အလမ်းကို စဉ်းစားပါ။
ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, Reed diffuser ပုလင်း, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, ဘီယာ ဖန်ပုလင်း,